VLC Media Player kacha elu ma obere multimedia ọkpụkpọ. Ọtụtụ ọrụ nke a multimedia ọkpụkpọ nweta ihe kasị mma nkwado na-enwe ha ntụrụndụ. Nke a na usoro-akwado a dịgasị iche iche nke formats dị ka MPEG -4, MPEG-2, MPEG-1, MP3, na DivX. Kasị pụta ìhè na atụmatụ nke ngwá ọrụ a na-akwado VCDs, DVD, na ọtụtụ gụgharia ogbugba ndu.
Nkebi nke 1: Gịnị bụ otu ihe ISO faịlụ?
Part 2: Olee otú Play ISO faịlụ na a VLC Media Player on Windows?
Part 3: Olee Play ISO faịlụ na a VLC Media Player on Mac?
Part 4: The kasị mma VLC nnyemaaka
Otu ISO faịlụ bụ DVD ma ọ bụ CD oyiyi na zoro dị ka disk image ke ofụri ofụri. Nke a Archive faịlụ bụ nnọọ aka nkwado ndabere na mpaghara DVD ma ọ bụ CD rụọ ọrụ nke ọma. Karịrị ole na ole ISO arịọnụ ngwaọrụ dị taa. Ị nwere ike efego ISO faịlụ site na iji ọ bụla ngwá ọrụ na nke a udi. Ọ bụla ISO faịlụ agwụ na ndọtị nke ISO.
E nwere ihe anọ ụzọ na-egwu ISO faịlụ na a VLC Media Player on Windows.
Na VLC Media Player on Windows, họrọ Media> Open File. Ị ga-enweta a nchọgharị-dị ka dialog ịhọrọ ndị kasị chọrọ ISO oyiyi.
The nzọụkwụ ọzọ bụ pịa "Open" button na-egwu ọdịnaya ISO faịlụ ozugbo.
Emeghe gị Windows Explorer Ohere. Ịdọrọ ISO faịlụ n'ime interface nke VLC Media Player.
Right pịa na ISO faịlụ ka họrọ "Open na" nhọrọ wee "Họrọ ndabere mmemme".
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ "More Mmemme". Ị na-enweghị ike ime ya na kọmputa gị na mgbalị mbụ? Ị nwere ike ịhọrọ a mgbasa ozi ọkpụkpọ site na listi.
Ị ga-ego kacha adabara checkbox na mmemme ndepụta. Usoro a na-ahapụ VLC Media Player imeghe ISO faịlụ na-emekarị. Nke a dị mfe usoro-eme ka a mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka ndabere omume na-emeghe ọ bụla ISO faịlụ.
Right pịa na ISO faịlụ na-ege ntị Njirimara. Pịa na "Change" ke Njirimara window. Agagharị na-VLC Media Player aka.
Ọ bụrụ na ị pịa "Mee" button, na ISO faịlụ ka atọrọ ka "Open Na" Nke a media ọkpụkpọ.
Nkebi nke 3: Olee otú iji Play ISO faịlụ na a VLC Media Player on Mac?
Right pịa na ISO faịlụ ma họrọ Mepee na / Disk Utility.
Pịa akara ngosi nke na-egosi n'okpuru ISO na Disk Utility.
Pịa "Ugwu" button na-acha anụnụ anụnụ na agba.
Usoro a mounts ihe oyiyi ahụ dị ogugu disk usoro.
Mepee VLC Media Player.
Họrọ File> Advanced Open File> Disc taabụ.
Na Disc taabụ, họrọ Video_TS nchekwa bọtịnụ redio.
Pịa "Chọgharịa" na ahọrọ ihe ndị kasị tụrụ anya ISO Image.
Họrọ Video_TS nchekwa onyinyo a na pịa "Meghee."
Ị nwere ike igwu ISO faịlụ na a VLC Media Player on Mac ugbu a.
Nkebi nke 4: The kasị mma VLC nnyemaaka
Wondershare Video Converter Ultimate Kacha elu video Ntụgharị n'ụwa taa. Nke a video convertor bụ ihe kasị mma nhọrọ mgbe VLC Media Player apụghị egwu ụfọdụ ISO faịlụ. Nke a bụ n'ihi Wondershare Video Converter Ultimate bụ ihe kasị mma VLC nnyemaaka.
A ndepụta nke edezi ngwaọrụ dị na ntuziaka nke Onye ọrụ-enyi na enyi video Ntụgharị. Ọrụ nke a ọhụrụ video convertor nwere ike tọghata, download, dezie, welie kpọọ, hazie, ọkụ, ma na-ekiri faịlụ na ihe karịrị 150 formats.
Olee otú Play ISO faịlụ na Wondershare Video Converter Ultimate?
The usoro na-egwu ISO faịlụ na Wondershare Video Converter Ultimate na Windows na Mac bụ fọrọ nke nta ahụ. Otú ọ dị, i nwere na nke kacha mma kwesịrị ekwesị mbipute a ngwá ọrụ.
Pịa Ibu Ibu DVD mbubata gị ISO faịlụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ mbubata ọzọ ISO faịlụ, pịa "Tinye Files" na mgbe mbubata chọrọ faịlụ.
Ị nwere ike ịdọrọ ihe ISO faịlụ na dobe ya na mmemme window ozugbo.
Ahọrọ "mmepụta Format" na pịa ndị kasị mma kwesịrị ekwesị usoro nke mmepụta faịlụ.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị dezie faịlụ, ahọrọ "Setting".
Pịa "tọghata" button iji tọghata faịlụ.
Ị ga-ekpebi na faịlụ a n'okpuru PC n'ọbá akwụkwọ.
Pịa "Disk" ịgbakwunye niile mgbasa ozi na diski na faịlụ tree.
I nwekwara ike iji "Import" button ịgbakwunye kpọmkwem faịlụ.
Họrọ "Computer" ke Stream taabụ.
The streamed faịlụ ga-akpọ na-akpaghị aka anya.
Olee otú Play .avi Videos na VLC media Player?
15 VLC mkpirisi i nwere mara!
Olee otú Idozi VLC audio mmekọrịta nsogbu?
> Resource> VLC> Olee otú iji Play ISO faịlụ na a VLC Media Player?